Deni oo madaxtoyada Puntland ku kulmiyay mas'uliyiintii Garowe joogtay! ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Deni oo madaxtoyada Puntland ku kulmiyay mas’uliyiintii Garowe joogtay!
Deni oo madaxtoyada Puntland ku kulmiyay mas’uliyiintii Garowe joogtay!
Madaxweynaha Maamulka Puntland ee uu caleemo saarkiisu xalayto ka dhacay magaalada Garowe ayaa saakay markale madaxtooyadda maamulkaasi ku wada kulmiyay dhamaan xubnihii ku sugnaa xarunta Puntland, ee Mucaardka iyo Muxaafadka.
Madaxda ayaa quraac sharafeed wadajir aheed saaka loogu sameeyay madaxtooyada magaalada Garowe, sida xogaha aan ku heleyno, waxaana kulamo gaar gaar ah yeeshay madaxda kala duwan ee kusugan magaalada Garowe.
Wararka aan ka heleyno magaalada Garowe ayaa sheegaya in madaxda aysan laheyn qorshe ahaan inay mid mid isku arkaan, waxaase la hadal hayaa inay kulamo gaar gaar ah yeelan doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda Soomaaliya.
“Madaxweynaha Dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Quraac sharafeed iskugu keenay Madaxda D. gobaleedyada iyo Madaxweynaha Soomaaliya, taas oo ka dhacday Madaxtooyadda Puntland ee Garoowe” waxaa sidaasi lagu yiri qoraal ka soo baxay Madaxtooyadda Puntland.
Dhanka kale Xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale ku sugnaa madaxtooyada magaalada Garowe, waxaana la sheegayaa in kulamo la qaadan doonaan masuuliyiinta maamulka Puntland.
Mas’uuliyiinta ku sugan Garowe ayaa xalay jeediyay khudbad u muuqatay sida ay u wada jecel yihiin horumarka Soomaaliya, iyagoona ku wada baaqay IS-CAFIS iyo hormarka oo laga wada Shaqeeyo, kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya ooda ka gediyay cinwaankaasi.
Previous articleGudoomiye Mursal oo sameeyay xil magacaabis (Akhriso wareegto)
Next articleDaawo:- tuug xadi rebay silsilad dahab ah oo ay tii dheereed ka raacday!!!